ब्रोकाउली किन खाने ? यस्ता छन् रोचक फाइदाहरु ! – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौँ । ब्रोकाउलीमा पाईने तत्वले स्तन क्यानसरबाट बचाउन मद्धत गर्छ । खासमा क्यानसर लागेको सुरुवाती अबस्थामा ब्रोकाउली बढी प्रभावकारी मात्रै नभई यसले क्यान्स लाग्नबाट नै बचाउन ठूलो भूमिका खेल्नै हालैको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
ओएसयू कलेज अफ पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन साइंसेजले गरेको अध्ययन अनुसार यसको सेबनले लामो समय सम्म क्यान्सर रोक्न र कम गर्न सकिने तथ्य बहिर आएको हो । ब्रोकाउली र अन्य सल्फोराफेन तत्व पाईने तरकारीहरुले लामो समयसम्म क्यान्स लाग्न बाट बचाउन सक्ने ओएसयू कलेज अफ पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन साइंसेजका प्रोफेसर एमिलीको दाबी छ ।
अध्ययनपछि एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रोफेसर एमिलीले भनेका छन् हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौँ र यस बिचमा हामीले थुप्रै प्रमाणहरु पत्ता लगाएका छौँ । यो अध्ययन स्तन क्यानसरले ग्रसीत महिलाहरुमा केन्द्रित राखेर समेत गरिएको एमिलीले बताए । ति महिलाहरुमा सल्फोराफेनको प्रभाव केही समयमा नै देखिएको थियो । जसमा ५४ महिलाहरु सहभागी थिए ।